အဏ္ဏဝါဒီဇယ်အခြေခံဗီဒီယိုအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ - Marine Diesel Basic
အဏ္ဏဝါဒီဇယ်အခြေခံ ဗီဒီယို အလုပ်ရုံ
ဒီအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှကြိုဆိုပါ၏ ဗီဒီယိုများမှာ တိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းနှင့်အာရုံစိုက်; အမှုအရာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာလွှမ်းမိုးသောမရှိဘဲအလုပ်ဘယ်လိုအသုံးဝင်သတင်းအချက်အလက်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာအဏ္ဏဝါ mechanics ရဲ့ဖြစ်လာ, အခြေခံလိုအပ်ချက်များမဟုတ်နားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
တိတ်ဆိတ်တဲ့တူးမြောင်းတလျှောက်နှိပ်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာတဝှမ်းပင်လယ်ကူးရှိမရှိ, ကျွန်တော်တစ်ဦးလှေများအပေါငျးတို့သအကြောင်းပြချက်ခံစားရန် - ငါ့မစ်ရှင်အင်ဂျင်အခန်းတစ်ခန်းထဲကလူတွေရဖို့ရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါဗီဒီယိုများငါ၏အလူကြိုက်များစာအုပ်အဏ္ဏဝါဒီဇယ်အခြေခံ 1 (ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဖုံးအုပ် 300 + ရေးဆွဲနှင့် recommissioning-သို) ကိုဖြည့်စွတ်ဖြစ်ကြသည်။
ဘယ်လိုအဏ္ဏဝါဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့်စနစ်များအလုပ်, အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့်များနှင့်အဘယ်အရာကိုထွက်ကြည့်ဖို့ရှင်းပြတိုတို, Non-နည်းပညာဆိုင်ရာဗီဒီယိုများ၏အသစ်များကိုစီးရီးမိတ်ဆက်ခြင်း။
E1 တစ်ဦးကို Maintenance Log in ဝင်ရန်သိမ်းဆည်းထားပါမှငါးအကြောင်းရင်းများ
ကအဏ္ဏဝါဒီဇယ်အင်ဂျင်နှင့်စနစ်အများအတွက်ကို Maintenance Log in ဝင်ရန်စောင့်ရှောက်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်ထွက်ရှာပါ။
အစဉ်အဆက်တစ်ဒီဇယ်အင်ဂျင်အလုပ်လုပ်ပုံကိုအံ့ဩ? ဤတွင်ရိုးရှင်းသော drawings နဲ့ animations တွေကိုသုံးပြီးရေတို, Non-နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းပြချက်ပါပဲ။
E3 လေဖြတ်ခြင်းနှင့် Valve
တစ်ဦး Valve Timing ပုံကြမ်းကိုနားလည်ခြင်း E4
ဒီဇယ်အင်ဂျင်လေဖြတ်, သံသရာ, injectors နှင့်အဆို့ရှင်၏ဆွေးနွေးချက်အားဖြင့်ရောထွေး။ ဤဗီဒီယိုအားသူတို့တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကရှင်းပြသည်နှင့်မည်သို့သူတို့သည်ငါတို့မော်တာအလှည့်အဖြစ်အတူတကွအလုပ်လုပ်ကြသည်။
ဤဗီဒီယိုအားရိုးရှင်းသော drawings နဲ့ animations တွေကိုသုံးပြီးတစ်ဆို့ရှင်အချိန်ကိုက်ပုံအလုပ်လုပ်ပုံကိုရှင်းပြသည်။
E5 ဖွင့်ပွဲနှင့်ပိတ်ပွဲအင်ဂျင် Valve
E6 Timing ခါးပတ်နှင့်အချိန် Marks
အင်ဂျင်အောက်စီဂျင်ကိုရှူရှိုက်ခြင်းနှင့်အိပ်ဇောဓာတ်ငွေ့ထုတ်ရှူရှိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါက Camshaft အပေါ် cams မောင်းနှင်နှင့်ပစ္စတင်များလှုပ်ရှားမှုဖို့အချိန်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်အဆို့ရှင်ခြင်းဖြင့်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးကအချိန်ကိုက်ခါးပတ် (ဂီယာတစ်ခုသို့မဟုတ်ကွင်းဆက်) ကို Camshaft (နှင့်အဆို့ရှင်) နှင့်ဒီဇယ်လောင်စာထိုးစုပ်စက်မှထိုလက်ကိုင်၏လည်ပတ် (နှင့် piston) တွေကိုတပြိုင်တည်းအလုပ်လုပ်အသုံးပြုသည်။ တစ်ဦးကမှန်ကန်စွာ installed အချိန်ကိုက်ခါးပတ်အင်ဂျင်၏ပြေးဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။
ဒီဇယ်ဆီ - ဆားကစ်, တင့်ကား, filter များ, ညှစ်ထုတ်လိုက် & ပိုပြီး
တိုင်းဒီဇယ်အင်ဂျင်လောင်စာဆီလိုအပ်ကြောင်း - ဒါပေမယ့်ဒီဇယ်၏အခြားနှစ်ဦးကိုလုပ်ငန်းဆောင်တာတစ်ခုအင်ဂျင်အတွက်ဘာတွေလုပ်နေလဲ? နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင် Cetane, Cloud Point သို့နှင့် ULSD အကြောင်းကို။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကြှနျုပျတို့တင့်ကားအတွင်းထည့်သွင်းနေတဲ့အရာကိုပိုကောင်းတဲ့နားလည်မှုရဖို့။
လောင်စာဆီ filter များမိုက်ခရွန်တိုင်းတာကြသည် - သို့သော်မိုက်ခရွန်ဘယ်လောက်သေးငယ်တဲ့လဲ? ဤဗီဒီယိုအားတစ်မိုက်ခရွန်နှင့်တတ်နိုင်သမျှကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အဘယ်ကြောင့်ဒီယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ကြံ့ခိုင်ဒီဇယ်အင်ဂျင်မှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်မရဘူးသေးငယ်တဲ့အရာဝတ္ထုလူသားမြားသညျအဘယျအရွယ်အစား, အဘယျကရှင်းပြသည်။
တိုင်းအင်ဂျင်လောင်စာဆီလိုအပ်ကြောင်း - ဒီဗီဒီယိုကိုကုန်းပတ်လောင်စာ Filler ကနေလောင်စာ gauge မှတစ်လှေပေါ်တွင်ဒီဇယ်လောင်စာ circuit ကိုအပေါငျးတို့သအစိတ်အပိုင်းများကိုရှင်းပြသည်။
ငါတို့သည်ငါတို့၏အကြံပေးအဖွဲ့အတွက်လောင်စာထားရန်အဆင်သင့်အနေတဲ့အခါမှာကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်းပတ်ပေါ်တွင်လောင်စာဆီလျောက်ပတ်၏ထင်တစ်ခုတည်းသောအချိန်ဖြစ်ပါသည် - သေးလျောက်ပတ်သည့်အကြံပေးအဖွဲ့မှထွက်ရေနှင့်ညစ်ညမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါဝင်သည်။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာအကြှနျုပျတို့လောင်စာ filter ကိုကတော့ကြည့် ယူ. ရေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်တင့်ကားကျွန်တော်တို့ရဲ့ contamination ဖို့အကောင်းဆုံးအလေ့အကျင့် refueling ။
တစ်လှေပေါ်ဒီဇယ်လောင်စာလိုင်းများအဘို့အညာဘက်ကိုရေပိုက်ကို select လုပ်နည်း - ob လောင်စာရေပိုက်ပုံနှိပ်စာလုံးများနှင့်နံပါတ်များအမှန်တကယ်အဘယ်အရာကိုဆိုလိုပါသနည်း
12 ကျော်ဗီဒီယိုများဤအပိုင်းကိုများအတွက်စီစဉ်ထား ...
ချောဆီအရည်ကြည် - နားလည်မှုရေနံ, filter များနှင့်ဆားကစ်
ရေနံ filter များ, ရေနံ၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အင်ဂျင်ရေနံဆားကစ်၏အတွင်းပိုင်းအပါအဝင်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ချောဆီအရည်ကြည်အပေါငျးတို့သရှုထောင့်မှာတစ်ဦး In-depth ကိုကြည့်။